Su'aal Convair 580 FSX
Bilood 11 4 todobaad ka hor #993 by sruble
Waxaan dhawaan soo dejiyey heshiiskii 580 fsx. Dhibaatada aniga ii jirta ma jiro gudi vc ama 2d. Caawimaad kasta waa loo mahadcelin doonaa. Mahadsanid
Bilood 11 4 todobaad ka hor - Bilood 11 4 todobaad ka hor #994 by DRCW
Hello, Waa maxay nooca FSX? Boxed ama Steam? Ma waxaad ku socotaa horudhaca DX10? Haddii aad hayso nuqul ka mid ah FSX, waa Deluxe? Haddii ay sidaas tahay waxaad soo dejisay SP1 iyo SP2?
Waxaan isticmaalaa daabacaadda dahabka ee FSX Boxed oo la yimaada dardargel, (SP1 & SP2). Waxaan soo dejiyey diyaaradkan iyada oo aan wax dhibaato ah. Waxaan haystaa VC shaqeyn buuxa. Ma jiro shaashadda 2D ee shaashadan. Abuuruhu wuxuu isticmaalay shaashado ka duwan diyaaradaha kale ee FSX ee FSX. Waxaad ku qori doontaa cinwaanka (SP2 FSX) Haddii aan SP1 iyo SP2 la rakibin, diyaaradahaani ma shaqeynayaan. Ka soo qaad khariidadaha duulimaadyada kor ku xusan, waana inaad haysataa diyaarad shaqaynaysa. Cambaareyn!
Last edit: Bilo 11 4 usbuucyo by by DRCW.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: sruble
Bilood 11 3 todobaad ka hor #1004 by sruble
Waxaan ka shaqeynayaa Steam, waxaan dib u furay kadibna dib loo rakibay waxaa ka shaqeynaya fiicnaan vc. Thanks
Bilood 11 3 todobaad ka hor #1005 by DRCW
Ku farxi in ay maqasho ay shaqeyneyso. Haddii aad daaqad u sameysey 10, hubi internetka wixii arrimo la ogyahay oo dhan FSX. Dhulgariirinta